काठमाडौँ । नाम र राजधानी तोक्न सफल भएको खुसीयालीमा मधेस सरकारले मंगलबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ । सोमबार प्रदेश सभामा मतदान प्रक्रियाबाट प्रदेशको नाम ‘मधेस’ र राजधानी ‘जनकपुरधाम’ तय भएको खुसीयालीमा सरकारले माघ ४ गते सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए । याे पनि पढ्नुस् प्रदेश […]
काठमाडाैं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता राजेन्द्र महतोले प्रदेश २ को नाम मधेश र राजधानी जनकपुरधाम तोकिएको बधाई दिएका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको जनकपुर राजधानी भएको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरेका छन् । ‘मधेश आन्दोलनको उद्गम स्थल, मेरो निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको जगत जननी माता जानकीको जन्मभूमि ‘जनकपुरधाम’ प्रदेशको स्थायी राजधानी […]
January 17, 2022 N88LeaveaComment on प्रदेश २ ले पायो नाम र स्थायी राजधानी, नाम पारित हुने बित्तिकै घन्कियाे यस्ताे नारा
काठमाडाैं । प्रदेश २ ले सोमबार नाम र स्थायी राजधानी पाएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम पारित गरेको हो । प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीबारे अन्य प्रस्ताव पनि पेस भएकोमा सुरुमै स्थायी राजधानी जनकपुरधाम र नाममा मधेसको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत पुगेपछि अन्य प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरिरहन […]
श्री स्वस्थानी माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् माघ ४ गते मंगलबारकाे राशिफल
January 17, 2022 N88LeaveaComment on श्री स्वस्थानी माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् माघ ४ गते मंगलबारकाे राशिफल
वि.सं. २०७८ माघ ४ गते, मंगलबार तपाईको लागि कस्तो रहनेछ ? हेर्नुस् दैनिक राशिफल मेष: आजको मंगलबारको दिन खुसीसाथ सुरु हुनेछ। परिवारसँग राम्रो समय बित्नेछ। नोकरीमा राम्रो आर्थिक लाभ हुनेछ, पदोन्नतिको संकेत मिल्नेछ। यसैबीच, व्यापारीहरूको लागि नाफाको अवस्था छ। शुभ रंग : रातो शुभ अंक : ६ वृषः तपाईको मङ्गलबारको सम्पूर्ण दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ। परिवारका […]
January 17, 2022 N88LeaveaComment on यस्ता व्यक्ति हुन्छन् धनी, जसको शरीरका यी अंगहरूमा तिल हुन्छ
हरेक मानिसको कुनै न कुनै अंगमा तिल अवश्य हुन्छ । सामान्यतया शरीरमा तिल हुनु सामान्य मानिन्छ। तर समुद्र शास्त्रका अनुसार कुनै विशेष भागमा तिल हुनुको धेरै महत्व हुन्छ । समुन्द्रशास्त्रका अनुसार शरीरको कुन कुन भागमा तिल हुनु धनी हुनुको संकेत गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । हत्केलाको बीचमा समुद्रशास्त्र अनुसार हत्केलाको बीचमा तिल हुनु […]
काठमाडौं । मानिस आफ्नो जीवनमा नयाँ नयाँ कीर्तिमान राख्न चाहन्छ । त्यही कीर्तिमान राख्ने होडमा लागेका छन् ७५ वर्षे एक वृद्ध । उनी हुन् भारतको आगराका हसनुराम आम्बेडकरी । उनले अहिलेसम्म ९३ पटक अलग–अलग चुनाव लडिसकेका छन् । उनले अहिलेसम्म एक पटक पनि चुनाव जितेका छैनन् । तर चुनावमा लड्न भने छाडेका छैनन् । चुनाव […]
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्सको अलबसामा अलपत्र अवस्थामा रहेको आफ्नो छोराको शव नेपाल ल्याउनका लागि आर्थिक सहयोग गरिदिन सिन्धुपाल्चोक खाडीचौरका भुजेल दम्पत्तीले आग्रह गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोक खाडीचौरका स्थायी बासिन्दा रही काठमाण्डौंको काँडाघारीमा अस्थायी रुपमा बसोबार गर्दै आएका श्याम बहादुर भुजेल र उनकी श्रीमती बुद्धीमाया भुजेलले छोराको शव ल्याउन आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने भन्दै सहयोगका लागि […]
काठमाडौं । अटोमोटिभ कम्पनी जैष्णवी ग्रुपले आफ्नो इलेक्ट्रिक बाइक नेपाली बजारमा ल्याएको छ । जैष्णवी समूहले अन्य बाइकको तुलनामा धेरै अनौठो विशेषता र ऊर्जाको धेरै कम खपत गर्ने चिनियाँ इलेक्ट्रिक दुईपाङ्ग्रे सवारी उत्पादक कम्पनी बेन्ल्गसँग साझेदारी गर्दै ‘याक बाइक’ नाम दिएर इलेक्ट्रिक बाइक सार्वजनिक गरेको हो । यसले सवारीमा इन्धनको प्रयोग कटौती गरी नेपालको पर्यावरणमैत्री […]
January 17, 2022 N88LeaveaComment on रामकुमारी झाँक्रीले १०० दिनमा के के गरिन् ?
काठमाडाैं । सहरी विकास मन्त्रीका रुपमा रामकुमारी झाँक्रीले सय दिन पूरा गरेकी छन्। गठबन्धन सरकारमा सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनमा उनले आफ्ना विभिन्न ३७ उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी छन्। सहरी विकास विभागको कार्यालय बबरमहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले काठमाडौं उपत्यका भित्र र बाहिर अड्किएका कामहरूलाई तीव्र पारिएको उल्लेख गरेकी छन्। मन्त्री झाँक्रीले आफ्नो सय दिने […]
पाल्पा । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णु घर्तीले आफूलाई गाली बेइजत र अपमान गरेकोले आफूमाथि मानसिक तनाव र सामाजिक प्रतिष्ठानमा समेत आँच आई कार्य सम्पादन गर्न समस्या भएको भन्दै बगनासकाली गाउँपालिकाका सव इन्जिनियर भक्त बहादुर गाहाले राजिनामा दिनुभएको छ । सब इन्जिनियर गाहाले माघ १ गते देखि लागू हुने गरि पुस ३० गते पालिका कार्यालयमा राजिनामा […]